Waraaq ay u soo direen dadka reer Rooma ayaa keentay buuq, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Dib-u-Helitaanka Waraaqda Dadka Roomanka
Waxay ahayd bilowgii qarnigii 15aad markii wadaad reer Augustin ah oo la odhan jiray Martin Luther uu isku dayay inuu xasiliyo damiirkiisa waxa uu ugu yeedhay nolol aan eed lahayn. Laakiin inkasta oo uu raacay dhammaan cibaadooyinka iyo qaynuunnadii amarkii wadaadnimadiisa, Luther weli wuxuu dareemay inuu ka go'ay xagga Ilaah. Kadib, iyada oo macalin jaamacad ah oo baranaya warqaddii uu u qoray kuwii reer Rooma, Luther wuxuu isu arkay inuu sharaxaad ka bixinayo sharaxa Bawlos ee Rooma 1,17: Waayo waxay (Injiilka) ku tusinaysaa xaqnimada Eebbe ka timid, oo ka timaada iimaanka iimaanka; sida qoran, Kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa. Runta meeshan xoogga leh waxay ku dhufatay qalbiga Luther. Wuxuu qoray: